Cheap Fatịlaịza Counterflow Jụrụ Machine Suppliers na Factory | YiZheng
Machine Counter Flow Jụrụ bụ ọgbọ ọhụrụ nke ihe jụrụ oyi na usoro ikuku pụrụ iche. Ikuku jụrụ oyi na ihe mmiri dị elu na-emegharị mmegharị iji nweta nwayọ nwayọ nwayọ.
Gịnị bụ Counter Flow Jụrụ igwe?
Ọgbọ ọhụrụ nke Machine Counter Flow Jụrụ nyochara ma mepụtara site na ụlọ ọrụ anyị, ihe ọkụkụ ihe ọkụkụ mgbe jụrụ ajụ adịghị elu karịa ụlọ ahụ 5 ℃, ọnụọgụ mmiri ozuzo adịghị ihe na-erughị 3.8%, maka mmepụta nke pellets dị elu, mee ka oge nchekwa nke pellets dịkwuo ogologo ma melite uru akụ na ụba rụrụ ọrụ dị mkpa. Ọ bụ ihe atụ a na-ejikarị eme ihe na mba ofesi ma bụrụ ihe ngbanwe dị elu nke akụrụngwa jụrụ oyi.
Ọrụ ofkpụrụ nke Counter Flow Cooling Machine
Mgbe ahụ si ihicha igwe gabiga Machine Counter Flow Jụrụ, ha na ikuku ikuku dị ha nso. Ọ bụrụhaala na ikuku jupụtara na mmiri, ọ ga-ewepụ mmiri n’elu ala nke ahụ. Mmiri dị n'ime ahụ na-akwaga n'elu site na ngwakọta nke granulu fatịlaịza wee buru ya pụọ ​​site na evaporation, n'ihi ya, a na-eme ka mmiri granulu fatịlaịza dị mma. N'otu oge ahụ, ọkụ ahụ na-ekpuchi ikuku, nke na-eme ka ikike ibu mmiri dịkwuo mma. Ikuku na-aga n'ihu site na onye ofufe ahụ iji wepụ okpomọkụ na mmiri nke granulu fatịlaịza na ngwa nju oyi.
Ojiji nke igwe na-agba agba mmiri
Tumadi eji maka obi jụrụ elu okpomọkụ granular ihe mgbe granulation. Igwe ahụ nwere usoro jụrụ oyi pụrụ iche. Igwe ikuku na ikuku dị elu na ihe iru mmiri dị elu na-agagharị na ntụgharị ihu, nke mere na ihe ndị ahụ ji nwayọọ nwayọọ na-ajụ oyi site na elu ruo na ala, na-ezere mgbawa elu nke ihe ndị na-eme ka oyi na-ekpo ọkụ n'ozuzu na-eme ka ọ dị jụụ na mberede.
Uru nke igwe na-agba agba mmiri
Na Machine Counter Flow Jụrụ nwere ezigbo mmetụta dị jụụ, ogo dị elu nke akpaaka, obere mkpọtụ, ọrụ dị mfe, na mmezi dị ala. Ọ bụ ihe atụ a na-ejikarị eme ihe na mba ofesi ma bụrụkwa ihe eji eme ka ihe jụrụ oyi.
】 1】 Ọnọdụ okpomọkụ nke ahụ dị mma adịghị elu karịa + 3 ℃ ~ +5 5 nke ime ụlọ; ọdịda = 3.5%;
】 2】 Ọ nwere ọrụ pụrụ iche nke ịwepụta pellet na-akpaghị aka mgbe ọ na-emechi;
【3】 Edo edo na ala ogo ndinuak;
4】 Ọdịdị dị mfe, ọnụ ala ịrụ ọrụ na obere ọrụ oghere;
Mgbakọ Counter Flow Cooling Machine Model Nhọrọ
Jụrụ olu (m)
Nke gara aga: Pulverized Coal burner
Osote: Rotary Drum myọcha Machine
Okwu Mmalite Gịnị bụ New Type Organic & Compound Fatịlaịza Granulator? The New Type Organic & Compound Fatịlaịza Granulator bụ akụrụngwa granulation a na-ejikarị arụ ọrụ nke fatịlaịza fatịlaịza, fatịlaịza organic, fatịlaịza na-edozi ahụ, fatịlaịza na-achịkwa ahapụ, wdg Ọ dabara maka nnukwu oyi na ...